IFTIINKACUSUB.COM: Qisso cajiib ah: Qabyaladda in la asaa may haboonayn!
Qisso cajiib ah: Qabyaladda in la asaa may haboonayn!
Iftiinkacusub.com: Wakhtigii dawladii Shuuciga ahayd , ayaa waxaa la yidhi waxaa meel fagaare ah isugu yimid dad aad u farabadan,kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa in ay aasaan Qabyaladda,taasi oo dadka qaarkood ay u arkayeen in ay tahay wax sax ah ,qaarkalana ula muuqatay wax dadka lagu marin habaabinaayay.
Shaygii ama Sanamkii qabyaladda loosoo eekaysiiyay,lana doonaayo in la aaso, oo markaasi qabrigii loo qoday dulyaalla , ayaa waxa isaga oo rooraaya yimi Xabaasha dusheedii nin ku dhawaaqaya "waar yaan qabyalada Dhulka lagu aasin".
Dadkii markaasi lasoo ururiyay ee lagu matalaayay in ay qabyalada aa'saan,ayaa waxa ay la yabeen ninkan iyada oo askartii iyo dhabar-jabintii dawladu ay meesha jogaan hadana leh waar yaan qabyalada la aasin!kadibna waxa ay waydiiyeen waxa uu ku diidaayo in qabyalada la aaso.
Waxa uu ninkii ku jawaabay"anigu ma diidani in qabyaladan sida xun inoo dabarjartay in la aaso ,balse waxa aan kasoo horjeedaa in Dhulka lagu xabaalo,waayo waxa aan ka baqanayaa in ay barri sidii geedkii inta ay soo baxdo in ay laamo,Xidido iyo Jirid yeelato, kadibna qabiil- qabiil ilaa qof-qof in hadhaw loo xidid siibo oo ay inagu taranto.
Dadkii goobta qabyalada lagu aasayay joogay, ayaa hadalkii ninka waxa ay u arkeen mid aan macno badan lahayn,sababta oo ah ,waxa ay ula muuqatay in qabyalada ay maanta aasayaan aanay dib usoo noqonaynin ,qabrigana aanay dib uga soo baxayn.
Muddo ka bacdi ayaa waxa la arkay waxyabahii uu ninkii ka shakisnaa,markii uu lahaa waar qabyalada yaan dhulka lagu aasin.Balse sababta iyo ujeedada ninku may ahayn oo kaliya in uu diidaayay in qabyalada dhulka lagu aaso ,xigmada iyo ujeedka hadalkiisu waxa uu ahaa mid intaasi ka xeel-dheer,isaga oo ay u muuqatay in ay tahay arintani qabyalad aasku filim iyo iska yeel-yeel dadka lagu marin hababinaayay.